Abakhiqizi be-Hood abakhelwe ngaphakathi / i-Telescopic - I-China eyakhelwe ngaphakathi / iTelescopic Hood Factory & abahlinzeki
I-Cooker Hood Ehlanganisiwe 913
I-Hoods ehlanganisiwe ngokuhlukahluka kobukhulu ukuhlangabezana nezinhlobo zezidingo zekhabethe. Amandla okudonsa kusuka phansi (550m3 / h) kuya phezulu (1000m3 / h) ngesisekelo ongasikhetha ngosayizi wekhishi lakho.Lonke lisusa umoya ngokushesha futhi lisuse intuthu ekhishini futhi ngomsindo ophansi ungaphazamisi ingxoxo yokupheka abantu.
Iphaneli enkulu yeHood ingaba insimbi engagqwali, izinhlobo zombala wepende, ingilazi ukufanisa kahle ikhishi nekhabhathi isitayela Amandla okukhanya okwanele kwe-LED esimweni esiyindilinga noma umucu okhethekile we-LED angakhethwa njengoba uthanda indlela yokulawula eneswishi yomshini esebenza kalula, i-electronic touch switch inkinobho yokuthinta enhle futhi egcwele ngokugcwele ngomsebenzi ohlakaniphile njenge-timer, irimothi nesisekelo se-WiFI kuphaneli ehlukile oyikhethayo.
Isivinini sokuphefumula esingu-3/4 sikudinga okuhle ukupheka okuhlukile ngendlela elula yokufaka Isetshenziswa ngezihlungi zegrisi ye-aluminium egezekayo, izingqimba ezine ze-aluminium + 1layer SS ikhava ukuheha amehlo omsebenzisi.
I-60cm Integrated Telescopic Cooker Hood ene-2-speed Isizinda 906/909
906: Telescopic Cooker Hood 60cm enezinga lokukhipha elingu-380m³ / h. 2 ukulawula ukuvinjelwa kwesivinini ngokushintshwa kwedwala. Ukukhanya kwe-LED kuqhubeka kusebenza ngaphezulu kwamahora we-100,000.
909: I-Telescopic Cooker Hood 60cm enezinga lokukhipha eliningi elikhetha ngomsindo ophansi womsindo wenjini yomsindo 2 ovula isivinini ngokulawula nge-rock switch. Ukukhanya kwe-LED kuqhubeka kusebenza ngaphezu kwamahora we-300,000.
Izindlela ezimbili zokungenisa umoya ngokuzithandela: phumela ngaphandle ngepayipi lokufaka lifakiwe noma liphinde lisetshenziswe ngaphakathi ngezihlungi zekhabhoni.